Chii chinofanira kunge chiri kurerwa kwemwana ane hypersensitive | Bezzia
Chii chinofanira kuva kurera mwana hypersensitive
Maria Jose Roldan | 07/01/2022 22:40 | Dzidzisai vana
Sensitivity chinhu chinowanikwa mumunhu. Zvisinei, zvinogona kuitika kuti kune vanhu vane kunzwisiswa kwakadaro kwakanyanya kudarika mune vamwe. Muchinoitika chevana, hypersensitivity yadudzwa idenho chaiyoiyo kuvabereki vakawanda.
Munyaya inotevera tinokuratidza zvinofanira kuitwa nevabereki, kana vakaona kuti vana vavo vane mwero wakakwirira zvikuru wokunzwa kupfuura vamwe vana vose.
1 Zvinhu izvo vabereki vevana vane hanya zvikuru vanofanira kuyeuka
2 Nzira yekuziva sei kana mwana ari hypersensitive?
3 Nzira yekurera sei mwana ane hypersensitive
Zvinhu izvo vabereki vevana vane hanya zvikuru vanofanira kuyeuka
Mwana ane hypersensitive acharatidza kutarisisa kukuru kune zvese zvese uye zvinhu zvidiki zvakatenderedza nharaunda yake. Vatarisana neizvi, vabereki vanofanira kufunga nezvekurera mwana wavo nemaonero akasiyana zvachose nevamwe vana.
Panyaya yevana vane hypersensitive, kudzora manzwiro kwakakosha uye kwakakosha zvikuru. Kutarisira uku kunobvumira mwana ari mubvunzo kuti adzivise kutambura kubva kune mamwe madhiri akadai sekuora mwoyo.
Nzira yekuziva sei kana mwana ari hypersensitive?
Pane zvinhu zvakati wandei zvinoratidza kuti mwana ane hasha zvakanyanya kupfuura zvakajairika:
Zviri pamusoro pevana vari kunyara uye kunyara.
Vanokudziridza mwero wetsitsi pamusoro penguva dzose.
Vane nguva yakaoma nekukurudzira kwakasimba sekunhuwa kana ruzha.
Vanowanzo tamba Uri wega.
Vane mwero wepamusoro wepfungwa mumativi ese.
Ndezvevana kusika chaiko.
Shows anotsigira zvikuru uye ane rupo nevamwe vana.
Nzira yekurera sei mwana ane hypersensitive
Kurera mwana ane hanya zvakanyanya kunofanirwa kuve kwakavakirwa pane zvese mukumudzidzisa kudzora manzwiro ake ose. Nokuda kweizvi, vabereki vanofanira kutevera nhevedzano yenhungamiro kana mazano:
Zvakakosha kuti mudiki anzwe achitsigirwa nevabereki vake. Kuva mubereki kana dzidzo zviri nyore zvikuru chero bedzi mwana ane chivimbo chikuru uye kuzvisimbisa.
Rudo nechidakadaka zvavabereki zvinofanira kuva zvinopfuurira. Kubva pakutsvoda kusvika pakumbundikira, Chero chinhu chinoenda chero bedzi mudiki achinzwa kudiwa.
Manzwiro nemanzwiro zvinofanira kuratidzwa nguva dzose. Vabereki vanofanira kutaura manzwiro avanoita kuitira kuti kutonga kwemanzwiro ndiko kwakanakisisa.
Nenzira yakafanana, vabereki vanofanira kuva nebasa rokubetsera vana vavo kuziva nzira yokutaura nayo manzwiro avo chaizvoizvo. Manzwiro anofanira kubuda kunze uye dzivisa zvinetso zvepfungwa zvinobvira zvakadai sokufunganya.
Kuziva kuteerera ndichimwe chinhu chinokosha pakurerwa kwakanaka kwomwana ane hanya zvikuru. Kuteerera uku kwakakosha kuitira kuti vanzwe vachinzwisiswa uye vachidiwa nguva dzese.
Muchidimbu, Kuva nemwana ane hypersensitive hakusi kuguma kwenyika kune chero mubereki. Iye mwana anonzwira tsitsi zvikuru kupfuura vamwe uye anokwanisa kunzwa manzwiro ake ose zvakasimba zvikuru. Tichifunga izvi, kurera vana kunofanirwa kutevedza nhevedzano yenhungamiro inobvumira mwana kuziva mabatiro uye kufambisa manzwiro avo ese nenzira yakanakisa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Vanamai » Dzidzisai vana » Chii chinofanira kuva kurera mwana hypersensitive
Upfumi hwedenderedzwa uye kukosha kwayo kune zvakatipoteredza
Kupeta fenicha yekushongedza mabhakoni madiki